Dzhon ग्लोवर - को थिएटर र सिनेमा थुप्रै विविध भूमिकाको प्ले छ जो ज्ञात अमेरिकी अभिनेता। क्षणमा आफ्नो क्यारियर भन्दा छैन, र यो आफ्नो प्रशंसक खुसी जारी।
Dzhon ग्लोवर सलिसबुरी, मेरील्याण्ड (संयुक्त राज्य अमेरिका), अगस्ट 7, 1944 मा जन्म भएको थियो। बाल्यकाल देखि एक अभिनेता बन्न सपना र 1966 मा उहाँले नाटकीय कला विशेषज्ञ मा एक विश्वविद्यालय डिग्री प्राप्त।
आफ्नो युवावस्थामा Dzhon ग्लोवर धेरै अर्थपूर्ण थियो। विश्वविद्यालय बाट स्नातक पछि, उहाँले न्यूयोर्क सारियो र पहिले नै तीन वर्ष पछि लोकप्रिय प्ले "फूल को गंध" मा भूमिका उतरा। र तीन - पहिलो ब्रडवे चरण लगे।
फिलिम अभिनेता मा आफ्नो क्यारियर 1973 मा शुरू भयो र पछि सय भन्दा बढी चलचित्रमा तारा अङ्कित छ, जो बीच प्रदर्शन मा खेल्न गयो, तर पनि टेलिभिजन शो मा भाग।
आज, Dzhon ग्लोवर फिलिम बाहेक अल्जाइमर रोग संग दान र सहयोगको मान्छे मा लगे भविष्यमा अभिनेता लागि एक निजी स्कूलमा सिकाउँछ।
सबैभन्दा सफल चलचित्र
रोमाञ्चक, कमेडी र नाटक - ग्लोवर संग फिलिमहरु को मुख्य विधाहरू। नायक को एक मनपर्ने प्रकार - चिसो र विचारशील हरामी। त्यसैले अभिनेता "महान् मात्रा podtseplen मा" देखा फिलिम, "व्हाइट नाइट", "चकलेट युद्ध", "Gremlins 2", "रात खूनी," आदि ग्लोवर द्वारा "Brimstone" को शैतानको बस अचम्मको। उत्कृष्ट असफल अभिनेता पनि आफ्नो टिभी श्रृंखला लागि आफ्नो debut मा नकारात्मक भूमिका "उतेजना Seared।"
तथापि, Dzhona Glovera अभिनेता भूमिका छैन भन्न सकिन्छ। त्यसैले, उहाँले उल्लेखनीय नाटक "फ्रस्ट" मा एड्स देखि मर को भूमिका संग सामना; टिभी चलचित्र मा "Dzhordzh Vashington," उहाँले उत्कृष्ट सामान्य गर्नेछ; ; को प्रतिभा-नाजी - श्रेणीमा "सुरूवात विन्दु" र फिल्म "दाऊदले" मा - एक पागल बुबा।
यो सनसनीपूर्ण श्रृंखला "Smallville" Dzhon ग्लोवर एक क्रूर र धूर्त लिओनेल Lyuttora प्ले। र यो भूमिका, सायद, सबैभन्दा अभिनेता को क्यारियर मा सफल एक बोलाउन। तर, एक कुख्यात नीच को रूप मा दर्शक अघि देखा पर्न गाह्रो मास्टर कसरी "नालायक को" कुनै कुरा छैन, लिओनेल अझै पनि मजा र ग्लोवर सजिलो वर्ण को एक स्पर्श उतर कि आलोचकहरु उल्लेख गरे। , सहकर्मी सेट बाटो गरेर, "गोप्य" मा जन संग काम, यसको सुविधाहरू ती भन्छन्। स्वादिष्ट - उदाहरणका लागि, छोरा खेलेका Maykl Rozenbaum, ग्लोवर धेरै गाह्रो काम र प्रतिभाशाली र अभिनेत्री Annette O`Tull छ Lyuttora भनिएको छ।
रमाइलो, मेरो जीवनमा उज्यालो र अलिकति लापरवाह अभिनेता धेरै oddities थिए छ। ग्लोवर - पछिल्लो एक 2014, मिडिया मा वाक्यांश "यूहन्ना निस्क्यो जब मा भयो। निर्णायक लडाई। कसले कसलाई? "। अभिनेता को प्रशंसक साँच्चै लाग्यो यो आफ्नो प्रेमीका पागल र नै संग युद्ध गर्न जा गए थियो। तर वास्तवमा, यो दुई लडाकूको-खेलाडीहरूलाई बीच लडाइँ थियो, र वाक्यांश रूपमा पढ्नुपर्छ निम्नानुसार: "Dzhon Dzhons - ग्लोवर Teysheyra। निर्णायक लडाई। जो जो छ? "
यहाँ एक नाम र थर बाहिर गडबड छ। र यूहन्ना ग्लोवर स्वास्थ्य सबै ठीक छ, र यो आफ्नो रचनात्मकता संग दर्शकहरुको प्रसन्न गर्न, र विशाल सकारात्मक मित्र चार्ज गर्न जारी छ।
को Wehrmacht को ट्यांक: विनिर्देशों र फोटो
कति तारा अमेरिकी झण्डा र तिनीहरूले के मतलब?
विद्रधि लक्षण: उनि के गर्दै छन्, र कसरी रोग नै उपचार गर्न
भव्य रूसी सिनेमा अभिनेत्री Yelena Safonova
नेतृत्व - खरिद गर्न सकिन्छ भनेर एउटा कला हो